Axmed Madoobe ayaa ku hanjabay in doorashada xildhibaanada uu ku wada qabanayo… – Hagaag.com
Axmed Madoobe ayaa ku hanjabay in doorashada xildhibaanada uu ku wada qabanayo…
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ku hanjabay inuu doorashada xildhibaanada Golaha Shacabka ku wada qabanayo magaalada Kismaayo, kadib markii uu sheegay in gobolka Gedo gacantiisa ka baxay.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa ku eedeeyay Dowladda Federalka Soomaaliya in ay doonayso inay gacanteeda ku mamusho xildhibaanada lagu dooranayo Garbahaareey, taasoo ka hor imaanaysa heshiiska doorashada.
“War Soomaaliyey, maxaa Jubbaland loogu diidan yahay in ay doorashadeeda u madax bannaanaato, sida lamid ah maamulada kale. Maanta mas’uuliyiinta gobolka Gedo waxay ku sugan yihiin Kismaayo, waxaa laga soo ceyriyay gobolkii ay ka talinayeen, sidee marka doorasho xor ah uga dhici kartaa Garbahaarey,” ayuu yiri madaxweyne Axmed Madoobe.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa nasiib darro ku tilmaamay in Dowladda Federalka ay dagaal gooni ah oo aan la garanayn ujeedadiisa kula jirto Jubbaland, isagoo tilmaamay in gobolka Gedo loo gacan galiyay maleshiyaad.